Umhlahlandlela wama-Slots aku inthanethi| Dlala ama-SLots amahhala (Akukho Ukudawuniloda Futhi Akukho Idiphozithi Edingekayo)
Ikhaya / Imihlahlandlela / umhlahlandlela we-slots
Imishini yama-Slots wekhasino edlalwa ku inthanethi isebenza ngendlela efanayo naleyo eyenziwa yimishini yama-slot emhlabeni wekhasino wezitini nodaka wangempela. Uyabona, ngenkathi imishini yama-Slot yokuqala eyenziwe ngo-1892 kanye nasekuqaleni kwe-20th century yayiyimishini ngokwemvelo, ukwakhiwa kwe-microchip kwashintsha konke lokho. Kulezi zinsuku isigebengu esisodwa esihlomile sinekhompyutha ngokuphelele, ngakho-ke akukho mehluko phakathi komshini we khasino eku-inthanethi nokulingana komhlaba wangempela.
Umshini we-slot uvamise ukuba nama-reel aphakathi kuka-3 no-5, ngamunye embozwe izithombe nezimpawu. Unqoba umdlalo womshini wokugembula uma ekugcineni kwawo, iqembu lezimpawu ezifanayo lifola.
Idlalwa kanjani i-Slot kumshini woku gembula
Umehluko oyinhloko phakathi komshini we-slot wangempela nomshini we-slot oku-inthanethi ukuthi awudingi ukufaka izinhlamvu zemali zomshini we-khasino eku inthanethi. Uvele uthumele isikweletu esithile kuso.
Umdlalo uqala lapho unquma ukuthi zingaki “izinhlamvu zemali” ongathanda ukubheja ngazo ku-spin. Iningi lemishini yama-slot yemukela osayizi bezinhlamvu zemali eziphakathi kuka-1c no-R10.
Okulandelayo kufanele unqume ukuthi mingaki imigqa ofuna ukuyidlala. Imishini yama-slot yokuqala ikuvumela ukuthi ubheje kulayini ophakathi nendawo, kepha kulezi zinsuku ungabheja ngaphezu komugqa, ngezansi komugqa, kuma-diagonals, nakubunjwa obuyinqaba futhi. Umshini ngamunye we-slot uhlukile, futhi akuvamile ukuthi uhlangane nemidlalo ekuvumela ukuthi ubheje kulayini abangafika kwabangu-20 nokuningi. Umqondo olula ngukuthi imigqa eyengeziwe obheja kuyo, iba nethuba elikhulu lokuthi uzowina okuthile ku-spin ngayinye. Ngemuva kokukhetha ukuthi mingaki imigqa yokukhokha ofisa ukuyivula (ukubheja), ucindezela inkinobho ye-Spin, bese ulinda ukubona umphumela. Uma izimpawu zilandelana, uwina izinhlamvu zemali.
Ama-Scatters Nama Wilds
Kusukela lapho imishini yama-slot yenyusa izinombolo zayo ezijwayelekile ezingama-reel zaba ngu-5, bangeze izimpawu ezengeziwe nakwezinye izinto. Lezi zimpawu ezingeziwe zenza umdlalo kube lula ukuwina. Akuyona yonke imishini yokugembula enayo, kepha iningi linayo.
Uphawu lwaseWild lusebenza njengothayela ongenalutho kumdlalo weScrabble. Kungaba yinoma yini oyifunayo. Lapho uphawu lwaseWild luvela zilandelane zimpawu eziswele eyodwa nje kuphela ukuze liwine, iWild iba uphawu olungekho. Emishinini eminingi yama-slot, lapho uphawu lwaseWild luqedela umugqa wokuwina, luvamise ukwengeza ukuphindaphindeka kwebhonasi kokuwinile, ngakho-ke kuhlale kungumbono owamukelekile.
Uphawu lweScatter – emidlalweni oluyesekayo – lusebenza njenganoma yini enye, kepha awudingi ukuthi luhleleke ukuze lunqobe. Uma nje okungenani kunezimpawu ezintathu zokuhlakaza ezibonakalayo, noma ngabe zivela kuphi kuma reel, uzowina ezinye izinhlamvu zemali.
Imishini eminingi yokugembula yekhasino eku-inthanethi iqukethe umdlalo webhonasi ongashukunyiswa iqoqo elikhethekile lezimpawu. Uzohlala uwina izinhlamvu zemali emdlalweni webhonasi, futhi inani oliphumelelayo libusa ukuthi mangaki.